आजदेखि क्वाटरफाइनल, उरुग्वे कि फ्रान्स, ब्राजिल कि बेल्जियम???......... - Bagaicha.com
आजदेखि क्वाटरफाइनल, उरुग्वे कि फ्रान्स, ब्राजिल कि बेल्जियम???………
RK २२ असार २०७५, शुक्रबार ०७:०२
२२ असार २०७५, रुसमा जारी विश्वकप २०१८ मा आज शुक्रवारदेखि क्वाटरफाइनलका खेलहरु हुँदैछन् । आज उरुग्वे विरुद्ध फ्रान्स साँझ पौने ८ बजे र ब्राजिल विरुद्ध बेल्जियम राति पौने १२ बजे भिड्दैछन् ।
सन् १९५० पछि विश्व च्याम्पिएन बन्ने दौडमा रहेको उरुग्वे र सन् १९९८ को विश्वविजेता फ्रान्सले आज रुसको निज्नी नोभगोरोड रङ्गशालामा आआफ्नो सामथ्र्य प्रदर्शन गर्नेछन्। दुवै टोली अपराजित रहँदै विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा पुगेका हुन् । समूह चरण अन्तर्गत खेलेका तीनवटै खेलमा उरुग्वे विजयी भएको थियो भने पोर्चुगललाई शीर्ष १६ अन्तर्गतको खेलमा २–१ ले पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा फ्रान्ससँगको भेट पक्का गरेको थियो । उरुग्वेले प्रतियोगितामा हालसम्म विपक्षी टोलीबाट एक मात्रै गोल खाएको छ भने कुल ७ गोल गरेको छ । यस्तै समूह चरणका खेलमा दुइमा जीत र एकमा बराबरीको नतिजा निकालेको फ्रान्सले समेत आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ । शीर्ष १६ अन्तर्गतको खेलमा अर्जेन्टिना जस्तो बलियो टोलीलाई ४–३ को नमिठो हार चखाएको फ्रान्सको आक्रामक खेल शैली उसको बलियो पक्ष रहेको छ ।
जारी विश्वकप फुटबलको सर्वाधिक गोलकर्ता टोली बेल्जियम सन् १९८६ पछि पहिलो पटक सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने लक्ष्यका साथ क्वार्टरफाइनलमा पाँच पल्टको विश्वविजेता ब्राजिलको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार पौने १२ बजे कजान रङ्गशालामा हुनेछ। ब्राजिलको सन्तुलित टोलीलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल यात्रा तय गर्नु बेल्जियमलाई सहज नभएपनि लुकाकु र हाजार्ड जस्ता बलिया आक्रामक खेलाडीले बेल्जियमको मनोबल उच्च पारेको छ। शुक्रबारको खेलमा ब्राजिलका क्यासिमिरो टोलीमा हुनेछैनन्। उनको स्थानमा टोलीले फर्नाडिन्होलाई मैदान उतार्ने तयारी गरेको छ। ब्राजिल शीर्ष १६ मा मेक्सिकोलाई २–० ले पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेको हो भने बेल्जियमले दुई गोलले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउदै जापानलाई ३–२ ले पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको हो।